Mashruuc | Jiannuo ahama soo saaraha biraha ahama
Soo-saare injineerinka alaabta birta ka samaysan
Qalabka salka ku dhisan
Qalabka iskuxirka iyo daboolka dhamaadka
Qalabka lagu baro
Albaabka ayaa gacanta ku haya qalabka
Guri > Mashruuc
Marina One, oo loo yaqaan "GREEN HEART" ama "GREEN VALLY", oo ah mid cufan, oo isku dhafan adeegsiga dhismayaasha wadnaha xarunta cusub ee maaliyadeed ee Singapore, ayaa dhameystiraya aragtida Maamulka Horumarinta Magaalada (URA) ee samaynta Singapore. "Magaalada Jannad", ayaa isla markiiba noqotay dhisme cusub oo laga dhiso dalka Singapore markii la dhammeeyo. Maadaama ay tahay soo saare khaas ah oo ku takhasusay cilmiga qalabka, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd waxay sharaf weyn u ahayd inay kaqeyb gasho mashruucan iyadoo lala kaashanayo macaamiisheena gudaha Singapore. JN waxay inta badan mas'uul ka ahayd qaybta birta aan cillad lahayn: Nidaamka birta birta ah ee birta ah, birta naxaaska ah iyo waxyaabaha la dhejiyay, alwaaxda birta birta ah ee birta ah, birta birta ah ee birta ah, shaashadda birta birta ah ee birta ah, birta xiritaanka birta, birta birta taraafka ah, birta guluubka , qashinka qaaliga ah ee aan xumuulka lahayn ee birta ah, birta aan xumuulka lahayn, birta birta birta ah, iwm.
American Deck + Railing
America Deck + Railing. waxaa loo habeeyay naqshad aan caadi ahayn iyo farshaxan aad u qurux badan. ay soo saartay shirkadda ayaa si wanaagsan looga iibiyaa dibedda. Haddii aad bixin karto sawir u sameynta, Foshan Jiannuo Hardware Products Co., Ltd. ayaa kuu sameyn kara naqshadeyn iyo horumarin adiga ku saleysan shuruudahaaga.
Terminalka Madaarka Changi 4
Madaama ay tahay garoonka diyaaradaha toddobaad ee ugu mashquulka badan adduunka maalmahan, Changi Airport waa gegada diyaaradaha rayidka ee ugu weyn Singapore iyo garoon diyaaradeed oo muhiim ah oo Aasiya ku yaal. Terminal-ka cusub ee dhawaan la furay ayaa ah laba dabaq, 25-mitir sare ah oo leh dabaq guud oo 225,000 mitir oo laba jibaaran ah. Waxaa la rajeynayaa inay kordhiso awoodda guud ee rakaabka ee hadda jira illaa 82 milyan sanadkii. Maaddaama ay tahay soo saare ku takhasustay cilmiga qalabka, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd waxay sharaf weyn u ahayd inay kaqeyb gasho mashruucan iyadoo lala kaashanayo macaamiisheena gudaha Singapore. JN waxay inta badan mas'uul ka ahayd qaybta birta aan cillad lahayn: Nidaamka birta birta ee birta ku shaqeeya, birta birta ee la dagaallama, iwm.
Mid ka mid ah suuqdii ugu dambeysay ee laga dukaameysto ee Orchard Road ka hor intaadan soo xareyn degmada Civic District, Orchard Central waa goob dukaameedka ugu dheereysa Singapore oo leh qaab dhismeedka muuqaalka u gaarka ah sida muraayadda muraayadda iyo farshaxanka maxalliga ah ee Matthew Ngui ee indhaha ku qabta xuubka farshaxanka dijitaalka ah. Waxay leedahay astaamo badan oo lagu faani karo oo ay kujirto soo bandhigiddii suuqgeyntii ugu horreysay ee magaalada qaabkeeda casriga ah, derbiga ugu dheer adduunka ee Via Ferrata derbiga, oo ah aruurinta ugu weyn ee rakibaadda farshaxanada caanka ah ee ay soo bandhigeen fanaaniinta caalamiga ah, 24/7-howleed oo saqafka sare ah iyo Discovery Walk. Maaddaama ay tahay soo saare ku takhasustay cilmiga qalabka, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd waxay sharaf weyn u ahayd inay kaqeyb gasho mashruucan iyadoo lala kaashanayo macaamiisheena gudaha Singapore. JN inta badan waxay mas'uul ka ahayd qaybta birta aan cillad lahayn: Nidaamka birta birta ku shaqeeya, iwm.
Mashruuca Cusbitaalka Sengkang wuxuu ku guuleystey abaalmarinta Platinum ee Hay'adda Dhismaha Awoodeeda ee Green Building Mark. Mashruucu, wuxuu daboolayaa qiyaastii 228,000 mitir murabac, waa xarun adeeg daryeel caafimaad. Waxay ka kooban tahay isbitaal dhexe, isbitaal bulshada iyo dhowr rugo caafimaad oo takhasus leh. Markii la dhammeeyo, waxay u oggolaaneysaa in baahiyaha caafimaad ee dadka deggan Sheng Gang in si habboon wax looga qabto. Maadaama ay tahay soo saare khaas ah oo ku takhasusay cilmiga qalabka, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd waxay sharaf weyn u ahayd inay kaqeyb gasho mashruucan iyadoo lala kaashanayo macaamiisheena gudaha Singapore. JN waxay inta badan mas'uul ka ahayd qaybta birta oo aan fiicnayn: Nidaamka birta birta ah ee birta ah, birta birta ee la dagaallama, birta-birta ee birta xaraashka ah, iwm.
EU Habitat waa degenaansho dhameystiran oo ku taal Singapore. Iyada oo laga duulayo muuqaalka ku xeeran, fikradda naqshadayntu waxay isu keentaa afar qaab nololeed oo kala duwan, iyada oo la adeegsanaayo qaababka nolosha ee kala duwan ee qoysaska casriga ah. Hadda, EU Habitat waxay noqotay bulsho deggen oo firfircoon, oo qancinaysa rabitaanka dadka ee sii kordheysa ee kula noolaanshaha dabiicadda. Maadaama ay tahay soo saare khaas ah oo ku takhasusay cilmiga qalabka, Foshan Jiannuo Hardware Co., Ltd waxay sharaf weyn u ahayd inay kaqeyb gasho mashruucan iyadoo lala kaashanayo macaamiisheena gudaha Singapore. JN waxay inta badan mas'uul ka ahayd qaybta birta oo aan fiicnayn: Nidaamka meeraha birta birta ah ee birta ah, Nidaamka xiritaanka birta birta ee birta ah, Xulka dabaasha birta birta ah, iwm.